စစ်ဘေးကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ရသူများ ပညာသင်ယူရေး
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း တစ်ကျောင်းသည် အဓိအားဖြင့် မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော နယ်စပ်ဒေသများမှ လူမျိုးစုများအတွက် ပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုအတွက် ပြည်သူများ သံသယမရှိအောင် နေနိုင်ရမည်ဟု အတိုင်ပင်ခံပြော
တာဝန်သိသည့် အစိုးရသည် အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းရုံမျှမက ပြည်သူများအနေဖြင့် သံသယပင်မရှိအောင် နေနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့ ပြောကြားသည်။
Episode 38: လိင်အလုပ်သမတွေအတွက် လူ့အခွင့်အရေး
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လိင်အလုပ်သမားများအတွက် ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေကို ပြောင်းလဲဖို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ရိုရီ မန်ဂါးဗင် ရေးသားသည်။ အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးလုပ်ခသစ်အဖြစ် တစ်ရက်ကျပ် ၄,၈၀၀ ကို မြန်မာအစိုးရက ယခုနှစ် မေလ တတိယပတ်အတွင်းက ကြေညာခဲ့သည်။ နှုန်းထားသစ်သည် မြင့်လွန်းသည်၊ သို့မဟုတ် နိမ့်လွန်းသည်ဟု အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများထံမှ အသံအမျိုးမျိုး ကြားနေရသည်။ သို့ရာတွင် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခသည် တစ်ဖက်မှကြည့်လျှင် ဆင်းရဲမှုနှင့်.
Rory Mungoven ရေးသားသည်။
UPDATED: Saturday 21. 7. 2018
Seagram’s ဝီစကီအား မြန်မာနိုင်ငံ၌ မိတ်ဆက်ပေးရန် Pernod Ricard ရည်ရွယ်ထား
မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်လာသည့် ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး ဝိုင်နှင့် ယမကာ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် Pernod Ricard က မြန်မာနိုင်ငံ၌ Seagram’s အမှတ်တံဆိပ် ဝီစကီကို မိတ်ဆက်ပေးသွားရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ဟု ပြောကြားသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ Seagram’s အမှတ်တံဆိပ် ကုန်ပစ္စည်းကို မိတ်ဆက်မြှင့်တင်ပေးဖို့ Pernod Ricard က ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Seagram’s ဟာ.
ယခုနှစ်အတွင်း မြေပြိုမှုများကြောင့် ဖားကန့်ဒေသတွင် လူ ၁၅ဝ ခန့်သေဆုံး
ကျောက်စိမ်းတူးဖော်သည့်ဒေသဖြစ်သည့် ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြိ့နယ်တွင် မြေပြိုမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာ ယခုနှစ်အတွင်း မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၁၅ဝ ကျော်ခန့် သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ကချင်အမျိုးသား လူမှုဖွံ့ုဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်းထံမှ သိရသည်။
အင်းဒင်သတ်ဖြတ်မှုသတင်းကို မရေးရန် ရဲအရာရှိများက စစ်ကြောရေးကာလအတွင်း ညှိနှိုင်းခဲ့ဟု ရိုက်တာ သတင်းထောက် ထွက်ဆို
ထက်ခေါင်လင်း / Myanmar Now